Norwegian Cruise Line ayaa daaha ka qaaday Viva cusub oo Noorwiiji ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Norwegian Cruise Line ayaa daaha ka qaaday Viva cusub oo Noorwiiji ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Viva Norwegian waxay bilaabi doontaa dhoofinta marinnada Mediterranean-ka ee cajiibka ah Juun 2023, ka dhoofinta magaalooyinka muhiimka ah ee dekedaha Koonfurta Yurub oo ay ku jiraan Lisbon, Portugal; Venice (Trieste) iyo Rome (Civitavecchia), Talyaaniga; iyo Athens (Piraeus), Greece.
Khadka dalxiiska ee Norway (NCL) maanta daah furay Viva Norwegian, markabka ku xiga ee ku jira nooca-cusub ee Prima Class.
Siinta martida waayo-aragnimo sare leh oo ay ku jiraan meelo bannaan oo dheeraad ah, nashqad maskax leh oo cajiib ah iyo adeeg gaar ah, Viva Norwegian waxay bilaabi doontaa in ay raacdo safarrada badda Mediterranean-ka ee cajiibka ah Juun 2023, ka dhoofinta magaalooyinka muhiimka ah ee dekedaha koonfurta Yurub oo ay ku jiraan Lisbon, Portugal; Venice (Trieste) iyo Rome (Civitavecchia), Talyaaniga; iyo Athens (Piraeus), Greece. Kadib waxay u dhoofi doontaa Koonfurta Kariibiyaanka ee xilligeeda Jiilaalka 2023-2024 oo bixisa ka bixitaan diirimaadka ee San Juan, Puerto Rico.
Muujinaya naqshadaynta sare iyo qaab dhismeedka walaasheed rikoodh jabiyay markabkii Prima ee Norwegian, Viva Norwegian, oo sidoo kale uu dhisay shirkad caan ah oo Talyaani ah oo samaysa markab Fincantieri oo ku taal Marghera, Italy, ayaa ku soo bilaabi doona dhererkiisu dhan yahay 965 cagood, 142,500 oo tan oo wadar ah, waxaanu dejin doonaa 3,219 marti ah oo laba jibaar ah. Socodayaashu waxay ku noolaan doonaan ilbiriqsi kasta oo safarkooda ah hoyga ugu waasacsan oo ay ku jiraan sumadda gudaha ugu wayn, muuqaalka badda iyo qolalka balakoonka qaybta.
Markabka heerka caalami ma bixin doono oo kaliya heerka shaqaale ee ugu sarreeya iyo saamiga booska markab kasta oo cusub oo dalxiis ah oo ku jira qaybaha dalxiiska ee casriga ah iyo kuwa qaaliga ah iyo noocyada kala duwan ee qaybaha ugu badan ee laga heli karo badda, laakiin sidoo kale waxay ku faani doontaa dib u qeexidda Haven ee Norwegian, NCLKaarka muhiimka ah ee ultra-premium wuxuu geli karaa fikradda markab-gudahood-markab. Goobaha dadweynaha ee Haven iyo 107 suuli oo uu naqshadeeyay Piero Lissoni, oo ah mid ka mid ah naqshadeeyayaasha ugu caansan Talyaaniga, ayaa ka muuqan doona sundeck ballaaran, barkad aan xad lahayn oo cajiib ah oo eegaysa soo jeedka markabka iyo isboorti bannaanka leh oo leh saunada dhalada leh iyo qol qabow.
Fasalka Prima' ee kala duwan ee waxqabadyada madadaalada ayaa sidoo kale ka dhigaya soo laabashadooda sare Viva Norwegian oo leh khibradaha-Prima-Class-ka-la heli karo oo ay ku jiraan kuwa ugu dhaqsaha badan ee hoos u dhaca weelka qallalan ee badda ee leh The Rush iyo The Drop iyo tartanka saddexda heer ee ugu weyn ee badda oo leh Viva Speedway.
Viva Norwegian waxay ka muuqan doontaa Ocean Boulevard, 44,000 cagood oo laba jibbaaran oo bannaanka socod ah oo ku wareegsan markabka oo dhan; Hoolka Raashinka ee ka baxa oo leh 11 nooc oo cunto ah; Concourse-ku wuxuu ku faanaa beer farshaxan oo bannaanka ah; barkadaha barkadaha ballaadhiyo iyo barkadaha qaabka infinity ee Infinity Beach iyo Oceanwalk, oo muujinaya buundooyinka dhalooyinka ee biyaha ka sarreeya.